Vaovao - Manaova sarontava amin'ny tarehy raha toa ka mitokantokana ny iray amin'ny ankohonanao, hoy ny WHO
Ny olona rehetra ao an-trano dia tokony hisaron-tava tarehy raha misy mitokantokana ao an-trano ka tsy afaka mijanona irery ao anaty efitrano iray, hoy ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (WHO).
Raha ny tokony ho izy, raha mila mitoka-monina ianao dia tokony hisaraka ao amin'ny efitranonao manokana miaraka amin'ny trano fidiany, hoy ny OMS Maria Van Kerkhove nandritra ny fanontaniana sy valiny tamin'ny Alakamisy.
Raha tsy afaka manao izany anefa ianao dia tokony “hiezaka ny hitazona ny halaviranao amin'ireo olona ao amin'ny fianakavianao araka izay tratranao. Hamarino tsara fa ao an-trano manao sarontava ianao, amin`ity tranga ity dia manaova saron-tava ara-pitsaboana, raha azonao atao izany. Raha tsy izany dia manaova sarontava lamba, ”hoy i Van Kerkhove.
"Alao antoka fa manao ny fahadiovan'ny tananao ianao ary manasa tanana tsy tapaka, mamono otrikaina ny tarehy, ataovy izay hahazoana sakafo betsaka sy fitsaharana ary rano be sy izany rehetra izany," hoy izy nanampy.
Ny sarontava dia nanjary fitaovana lehibe amin'ny ady manerantany amin'ny areti-mifindra COVID-19, saingy tsy afaka mamely irery ilay virus izy ireo, hoy ny fampitandremana Michael Ryan, izay nandray anjara tamin'io fotoana io ihany koa.
Nanentana ny olona i Ryan mba hanohy hanaraka ny fepetra fanalavirana ny fiaraha-monina, na inona na inona saron-tava na tsia.
“Mandresy tanteraka ny tanjon'ny [fanaovana sarontava tarehy] raha manidy ny halaviran'ny vatana ianao. Ary vao tsy ela akory izay no niainako [ny zavatra niainako] - nisy olona nisaron-tava… tonga namihina ahy ary hoy aho hoe: 'tsia'… ary hoy izy ireo 'fa manao sarontava aho.' Ary nieritreritra aho hoe, 'eny, fa mbola midika izany fa tsy afaka mandray isika,' toy ny hoe tiako ny mamihina, ”hoy izy.
“Ka ny sarontava dia manome anao io fiarovana fanampiny io, saingy tsy manome alalana anao amin'izay ny fanesorana ireo olana hafa rehetra. Ny fanasan-tanana sy ny sarontava dia zava-dehibe indrindra ", hoy izy, ary nilaza fa matetika ny olona no mikasika ny tarehiny sy ny saron-tava raha toa ka misaron-tarehy izy ireo, koa mila mahatadidy ny manasa tanana sy mampiasa Saniteratera matetika.